Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fianjerana fiaramanidina tany RDC: maty 23 ary manisa
Goma dia renivohitry ny faritanin'i Kivu Avaratra, any amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Any amin'ny morony avaratry ny Farihy Kivu no misy azy, eo akaikin'ny tanànan'i Gisenyi any Rwanda. Ny farihy sy ireo tanàna roa dia ao amin'ny Albertine Rift, sampana andrefana an'ny rafitra East Africa Rift.
Vata telo amby telopolo no indray tafaverina tamin'ny alahady lasa teo rehefa avy nianjera tamin'ny fiaramanidina kely tany amin'ny faritra be olona any Goma any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo ny fiaramanidina kely, hoy ny mpamonjy voina.
Olona roa no voavonjy talohan'ny nipoahan'ny fiaramanidina, anisan'izany ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa, hoy ny National Health Border Program, izay nanamafy fa 25 no maty tamin'ny fanambarana ny alahady teo.
Ilay fiaramanidina manana seza 19, izay entin'ny mpitatitra tsy miankina Busy Bee, dia nankany amin'ny tanànan'ny Beni, tokony ho 155 kilaometatra avaratra, rehefa nianjera tao amin'ny trano fonenana akaikin'ny seranam-piaramanidin'i Goma any amin'ny faritanin'i Kivu Avaratra, raha ny filazan'ny birao. an'ny governora Nzanzu Kasivita Carly avy any Kivu Avaratra.
Niorina tamin'ny 2007, Busy Bee Congo dia mpitatitra kaonty an-trano. Miasa fiaramanidina fiaramanidina turboprop LET izay manolotra serivisy avy amin'ny seranam-piaramanidina Goma manerana ny DRC atsinanana.
"Miakatra amin'ny vatana 23 izao isika," hoy ny mpandrindra ny famonjena an'i Goma, Joseph Makundi, tamin'ny AFP.
Nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny seranam-piaramanidina Goma, Richard Mangolopa, fa tsy misy sisa velona andrasana amin'ny loza.
Ny sidina Dornier-228 dia nizotra ho any Beni, 350 kilometatra (220 miles) avaratr'i Goma rehefa nidina tamina faritra fonenana akaikin'ny seranam-piaramanidina atsinanan'ny firenena izy io.
“Nisy mpandeha 17 tao anaty sambo ary mpikambana roa tao amin'ny ekipa. Nanomboka tamin'ny 9-9.10 maraina (0700 GMT) izany ”, hoy ny mpikamban'ny zotram-piaramanidina Busy Bee Heritier Said Mamadou.
Busy Bee, orinasa vao haingana, dia manana fiaramanidina telo manompo amin'ny làlan'ny sidina ao amin'ny faritanin'i Kivu Avaratra.
Ny iray amin'ireo mpiasan'ny orinasa ao amin'ilay tranokala notsongain'ny zava-misy marina tao amin'ny tranokala dia nanome tsiny ny "olana ara-teknika". Tsy mbola fantatra ny isan'ireo maty teny an-toerana